War degdeg ah: Saraakiil katirsan ciidan difaaca Puntland oo diiday mushahaar labo bilood kuna dhawaaqay go’aan degdeg ah. – Puntland News
Home 2017 January 12 Somali News War degdeg ah: Saraakiil katirsan ciidan difaaca Puntland oo diiday mushahaar labo bilood kuna dhawaaqay go’aan degdeg ah.
War degdeg ah: Saraakiil katirsan ciidan difaaca Puntland oo diiday mushahaar labo bilood kuna dhawaaqay go’aan degdeg ah.
Gaalkacyo 12 January:- Saraakiil katirsan ciidanka difaaca Puntland ayaa kasoo horjeestay mushahaar labo bilood ah oo ay dowladda Puntland ku sheegtay inay siinayso ciidamada mushaarkooda ka maqan yahay.
Taliyaha ciidanka kumaandooska Puntland Kornayl Jimcaale Takar iyo taliyaha ciidanka Godad ee gobolka Mudug oo haatan ku sugan magaalada Garowe ayaa diiday mushahaarkaan, iyagoo sheegay inay u baahan yihiin mushahaarka todobo bilood oo ay ciidanku leeyihiin.
Saraakiishaan ayaa sheegay inay sabtida go’aan cad qaadandoonaan islamarkaana ay ka war sugayaan madaxweyne Gaas marka uu dib ugusoo laabto magaalada Garowe.
saraakiishaan ayaa ah saraakiisha hogaaminaysa ciidamada difaaca Puntland ee dagaalka kaga jiray magaalada Gaalkacyo, kuwaas oo markii dambe kasoo tagay ciidankooda si ay xuquuqdooda dowladda uga keenaan,waana sababta ay magaalada Garowe u yimaadeen.